२०७८ आश्विन ६ बुधबार
काठमाडौं उपत्यकामा जेठ २० पछि निषे’धाज्ञा खुकुलो बनाउने तयारी ।
काठमाडौं : उपत्यकामा निषे’धाज्ञा लागु गरिएको आज एक महिना पुगेको छ । जेठ २० गतेसम्म कोरोना संक्रमणको भयाव’ह अवस्था न्यूनी’करण गर्न भन्दै निषेधा’ज्ञा जारी छ ।निषेधाज्ञा कहिले खुल्छ टुंगो छैन ।
पछिल्लो एक सातायता उपत्यकामा सं’क्रमण र मृ’त्युदर दुवै घट्दो क्रममा छ । जुन सकारात्म’क संकेत हो ।काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली भन्छन्, “वैशाख २० गतेदेखि जेठको पहिलो सातासम्म अवस्था निकै भया’वह थियो ।
अक्सिजन, बेड, अस्पताल नपाएको गु’नासो व्यापक थियो । अहिले ती समस्या समाधान भएका छन् ।”समयमै निषेधाज्ञा गरेका कारण उपत्यकामा ठूलो क्ष’ति रोकिएको उनले बताए । तर, चैतको अन्तिम साता वा वैशाखको पहिलो साताबाटै निषेधाज्ञा गरेको भए संक्र’मण रोक्न अझै सहज हुने उनको भनाइ छ ।एक साताअघिसम्म उपत्यकामा संक्रम’ण दर औसतमा तीन हजार बढी दैनिक थियो ।
अहिले त्यो संख्या दुई हजारको हाराहा’रीमा छ । नागरिककै स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर २० गतेसम्मको निषे’धाज्ञामा क’डाइ गरिएको पराजुली बताउँछन् । तर, अब विस्तारै स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाइ गरेर नि’षेधाज्ञा केही सहज बनाउनुपर्नेमा प्रजिअ पराजुली सहमत छन् ।
तर, अहिले नै संक्र’मणको अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर पूर्वानुमान गर्न नसकिने उनी बताउँछन् ।जेठ २० गतेपछि खाद्यान्न र किराना पसल भने बिहानको समयमा खोल्ने तयारी छ । २० गतेसम्म तरकारी पसलबाहेक अन्य सबै पसल बन्द गर्ने प्रशासनको निर्णय छ ।
यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्था समेत अहिलेको भन्दा केही बढी मात्रामा खुलाउन दिने तयारी छ ।निषे’धाज्ञा जारी राखेरै स्वास्थ्य मापद’ण्ड अपनाएर जनजीवन सहज बनाउनेतर्फ आफूहरु सकारात्मक रहेको पराजुली बताउँछन् । उनले भने, “संक्रमणको दर घट्दै गए केही सहज पक्कै हुन्छ । तर, के–के हुन्छ, अहिले भन्न सकिँदैन ।”
निषेधा’ज्ञा बढ्दै जाँदा कतिपयले नागरिकलाई कहिलेसम्म थुनेर राख्ने हो भनेर आउने गुना’साहरुबारे पनि आफू जानकार रहेको पराजुली बताउँछन् । उपत्यकामा तीन जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी संक्र’मित काठमाडौंमै छन् । यस्तोमा अझै नागरिक सचेत हुनुपर्ने सुरक्षा अधिकारीहरु बताउँछन् ।
२०७८ जेष्ठ १६, आईतवार १३:५१ गते 1 Minute 1423 Views
बधाई ! नायिका प्रियंका कार्कीलाई पुत्रीलाभ ।
चर्चित हास्यकलाकार अर्जुन घिमिरे ‘पाँडे की’ आमा ग्रिनसिटीमा, कस्तो छ अवस्था ?
ऊर्जामन्त्री भुसालभन्नुहुन्छ : भान्सामा एलपी ग्यास होइन, विद्युतीय चुल्हो राखौँ ।
उपेन्द्र यादव भन्नुहुन्छ : देउवाले दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज नगरेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुदैन ।
ईश्वर पोखरेल भन्नुहुन्छ : एमाले पार्टीमा युवाको आकर्षण ह्वात्तै बढ्यो, साढे तीन लाख सदस्य थपिए ।
सुदेश पराजुली भन्नुहुन्छ : ओली दलाल पुजीवादीको नाइके हुन ।